हायात व्यवस्थापन भन्छ : श्रमिकले माफी नमागेसम्म होटल खुल्दैन
३ असार, काठमाडाैं । आन्दोलनरत कर्मचारीले माफी नमागेसम्म होटलको सेवा सुचारु नहुनेे हायात होटल व्यवस्थापनले अडान लिएको छ । कर्मचारीले भने होटल व्यवस्थापनबाट आफूहरुमाथि गैरमानवीय व्यवहार भएको आरोप लगा...
Ujyaaloonline.com . ११ महीना अघि
काठमाण्डाै - राजधानीको पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ । मजदुर आन्दोलनका कारण विगत ६ दिनदेखि होटल सेवा प्रभावित भएको थियो । व्यावसायिक सुरक्षा नभएको भन्दै व्यवस्थापनले ...
ratopati.com . ११ महीना अघि
काठमाडौं– कर्मचारी यूनियनको आन्दोलनको कारण देखाउँदै पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी व्यवस्थापनले होटल खाली गरेको छ । पूर्व सहमतिअनुसार सेवा सुविधाको माग गर्दै कर्मचारीले हडताल गरेपछि होटल खाली भएको ह...